Real Madrid Oo Markii 3-aad Oo Xiriir Ah Ku Guulaystay Koobka Champions League iyo Gareth Bale Oo Laba U Kala Jaray Liverpool | Allbanaadir
Real Madrid Oo Markii 3-aad Oo Xiriir Ah Ku Guulaystay Koobka Champions League iyo Gareth Bale Oo Laba U Kala Jaray Liverpool
May 27, 2018 - Aragtiyood
Real madrid ayaa caawa markii saddexaad oo xiriir ah ku guuleysatay tartanka champions league taasoo ka qaaday liverpool.
los Blancos iyo Reds caawa shaxdooda ugu wanaagsanaa ayey garooonka lasoo galeen madama ku guuleysiga tartankaani ay ku han weynyihiin.
bilaaw wanaasan ayey aheyd ka dib markii ciyaarta ay labda dhinacbo ku bilaawdeen qaab xasiloon madama weerar iyo daafacb ay isku dheela tirayeen.
Mohamed salah ayaa ciyaarta laga saaray ka dib markii xiddigan uu dhaawac kasoo gaaray garabka midig ka hor ciaarta inta aan 30-daqiiqo la gaarin sidoo kale Carvajal ayaa ciyaarta laga saaray kaasoo asna ciyaarta dhaawac uga baxay.
qeybtii hore ee ciyaarta C,ronaldo ayaa shabaqa gaaray xilli calan sidaha garoonka uu sheegay in ay garab dhaaf tahay, Sidaasina ayey ciyaata kusoo idlaatay oo 0-0 ay isla dhaafi waayeen qeybta kowaad ee ciyaarta.
markii dib lisugu soo laabtay kooxda Real ayaa shabaqa Liverpool gaartay ka dib goolhayaha Reds xiddiga lagu magacaawo Krous uu kubad qalday misna Benzema uu ku ciqaabay kubadaasi.
Karim Benzema waxaa uu haatan dhaliyay 56-goal tartanka champions league xirfadsa kubadda cagta, waxaana ka sareeya Raúl (71), Lionel Messi (100) iyo Cristiano Ronaldo (120).
Reds waxaa goolka usoo celiyay xiddiga lagu magacaawo Mane oo noqday xiddigii ugu horeeyey ee Senigal ah oo final tartanka champions league shabaqa gaaray.
wax badan kama soo wareegan ka dib markii Gareth Bale uu shabaqa gaarayey ciyaartana uu 2-1 ka dhigay kaasoo dhaliyay markiii labad ee final tartan champions league.
gareth bale ayaa mar kale ciqaabay kooxda liverpool ka dib ciyaarta markii uu ka dhigay 3-1, wuxuuna noqday xiddigi saddexaad ee Biritish ah oo taariikhda qaarada yurub iyo champions league si isku mid ah goolal u dhaliya finalka tartanka waxaana kaga horeyay Phil Neal oo sameeyay sanadihii (1977 iyo1984).
daawo goolkii labaad ee uu Bale ka dhaliyay kooxda Liverpool.